Izizathu ezi-7 zokuba umxholo wakho usilele ukuhlangana kwakhona ngeMillennials | Martech Zone
Izizathu ezi-7 zokuba umxholo wakho ungaphumeleli ukuhambelana neMillennials
NgoLwesibini, Aprili 7, 2015 NgoLwesibini, Aprili 7, 2015 Douglas Karr
Kukho amaxesha xa ndifunda iziphumo ezithile kumaqela abantu okanye ngokwamaqela endikrokra kancinane. Anditsho ukuba le ngxelo iNewsCred ayibalulekanga ukuba abathengisi bayigcine engqondweni, kodwa ndiyakholelwa ukuba sihlala sithanda ukwenza idatha kwaye ngamanye amaxesha sifikelela kwizigqibo ezingachanekanga.
Ndihlala ndibuza umntu, ungathanda ukufikelela kubantu abangama-10,000 1 ngenqanaba lempendulo eli-500% okanye abantu abangama-25 abanenqanaba lokuphendula elingama-25%? Kwimeko apho unengxaki nezibalo- le yokugqibela iya kukhokelela kubaphenduli abangama-XNUMX. Ke, ngamanye amaxesha ayiyi apho umndilili… ngamanye amaxesha kuya kufuneka ungene nzulu apho zikhona iiches.
Ngapha koko, ngokubhekisele kwi-millennials, ndisenokuthetha ukuba ukufikelela Kaninzi inokuba yinto engathandekiyo. Idatha evela kolu phando ibonisa ukuba abanqweneli ukuthengiswa… ke kutheni unokwandisa ukufikelela kwakho ekuzithengiseni kuzo zonke ezi ndlela zoluntu kunye nezicwangciso? Ndisenokucebisa ngemidiya yoluntu njengesixhobo, kodwa iqhinga liya kwahluka ngokupheleleyo ngokusekwe kumacandelo endifuna ukuzibandakanya nawo.
Kutheni le nto iimveliso zikhathalela malunga neminyaka eliwaka? Ngo-2020, iwaka leminyaka liza kuba ngaphezulu kwe- $ 1.4 trillion kumandla okuchitha. Kwiimpawu, oko kuthetha ukuba ukuba awufikeleli kumawakawaka eminyaka, awuhambisani nekamva. Umxholo uqhuba unxibelelwano lwebrand, kodwa ukuba umxholo wakho usilele ngokupheleleyo ukubandakanya abaphulaphuli ekujoliswe kubo, kunayiphi inqaku? Iipesenti ezingama-62 zewaka leminyaka zivakalelwa kukuba umxholo okwi-Intanethi ubenza bazive benxibelelene ngakumbi kwaye bethembekile kuhlobo, kodwa ngama-32% kuphela afumana unxibelelwano lwentengiso yanamhlanje iluncedo.
I-NewsCred ibonelela ngale ngcebiso ilandelayo ukuze ihlangane kwakhona ngewaka leminyaka:
Umxholo womxholo okhethekileyo kubantu abathile iimfuno zenkcubeko.
Qinisekisa ukuba umxholo iluncedo okanye iluncedo ekusombululeni iingxaki zemihla ngemihla zeminyaka eliwaka.
Kuphephe ukuthengisa-y okanye ukuzazisa.
Nenjongo yokuba yokucinga kwaye okrelekrele.
Sukubhanka nentsholongwane okanye izincomo zentlalo zodwa.
qinisekisa Ngokwezifiso ngenqaku lamaxabiso, indawo, ubuhlanga, njl.
Sebenzisa iifomathi ekulula ukuzenza gaya kwaye wabelane.
Ukufunda ngakumbi malunga nokusebenzisa umxholo ukuthengisa ukuya kwiinkulungwane zeminyaka, kubandakanya nezifundo ezine zamanqaku eziwufumana ngokuchanekileyo, khuphela Isikhokelo seNewsCred simahla seMillennials namhlanje!
tags: umxholo we-infographicUkuThengiswa kweMpahlakwi-infographicmivuzoi-infographic yemileniyamiindaba
Nantsi indlela yokongeza izikweko kwiBali lakho eliya kuthengisa
Ukudibanisa amaqhinga okwandisa i-imeyile yakho yokuzibandakanya